Ụbọchị My Pet » 4 Ihe Kpatara A Profaịlụ Photo ga-mma gị Search Ịhụnanya
4 Ihe Kpatara A Profaịlụ Photo ga-mma gị Search Ịhụnanya
emelitere ikpeazụ: Nov. 25 2020 | < 1
Mkpa mbụ amụta
Anyị maara na ị na-keghị, ma anyị na-niile ikpe “na-ekpe ikpe a n'akwụkwọ site na ọ bụ cover,” karịsịa mgbe ọ na-abịa na-achọ a egwuregwu! Jide n'aka na profaịlụ gị foto na-egosi na ị na-achọ gị zuru mma.
Ndị mmadụ na-achọ ịhụ na ndị ha na-ekwu okwu
Ị nwere ike kasị dị ịrịba àgwà ma na-onye na-ada na ịhụnanya na ị tupu ha na nwere a hụperetụ bụghị kacha ihe aga-eme. Otú ọ dị mbụ gị na mbụ ozi bụ, ha na ndị ọzọ yiri ka zaghachi ma ọ bụrụ na ha na hụrụ onye dere ya mbụ.
More Chance Of Mmalite Ẹfiọhọ
Mgbe na-enyocha website, kasị ga pịgharịa site na foto nke òtù nke dakọtara na ha search, na-achọ onye na-abịakwasị ha anya. Enweghị a foto, na ị na-fọrọ nke nta ịkpọ nwere ụbọchị ruo gị site.
Photos Gwa A Puku Words, Tupu Ị na Ọbụna mesịa One
I nwere ike ịgwa a ọtụtụ ihe banyere onye na ma na ha na-ezi ezi ka ị na foto, otú eji nke a iwebata ka gị uru. Ntak tinye ihe mgbe ahụ, otu? Photos nke gị na a dị iche iche ndapụta, na-eme ihe ị hụrụ n'anya na-eme oké Ebido Mkparịta Ụka…
Ya mere, ihe ị na-eche maka? Debanye now
Ị Pụrụ Isi Chọta Ezi Ịhụnanya Online?